सीमा बन्द आवातजावत जारी, यही कमजोरी फेरि पर्ने भो भारी ! - Nepal Post Daily
बीरगन्ज, ७ असाेज । सर्वसाधारणको जनजिवन सहज पार्न सरकारले लामो दुरीका यातायात तथा आन्तरिक उडान सुरु गरेसँगै संक्रमणको जोखिम बढेको छ । लामो समयदेखि यातायात बन्द हुँदा घर फर्किन नसकेका भारतमा रहेको नेपाली कामदारहरु फर्किन थालेसँगै जोखिम बढेको हो ।
भारतमा कोरोनाभाइरस संक्रमण निरन्तर उकालो लागि रहेका बेला भारतमा काम गर्ने नेपाली कामदारहरु फर्किन थालेका हुन् । सरकारले हाललाई सीमा बन्द राखेपनि विभिन्न चोरबाटो हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने र सवारी चढेर घर फर्किने परिपाटि सीमावर्तीय सहरहरुमा मौलाएको छ । स्थानिय प्रशासन मुख्य सीमामा केन्द्रित भईरहँदा चोरबाटो प्रयोग गरि नेपाल फर्किनेहरुको संख्यामा वृद्धि भएको छ ।
पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको हटस्पट बनेको बीरगन्जमा संक्रमणको दर हाल न्युन भएपनि भारतबाट अवैध नेपाल प्रवेशका कारण यहाँ पुनः संक्रमणको दर बढ्ने सक्ने जोखिम रहेको स्थानिय सरोकारवालाहरुको भनाई छ । सीमामा खटिएका प्रहरीसँगको सेटिंग, सिमाका बासिन्दाहरुसँगको साँठगाँठले अवैध नेपाल प्रवेशलाई प्रशय दिएको छ ।
लामो दुरीका यातायात सञ्चालन भएदेखि बीरगन्ज बसपार्कबाट देशका विभिन्न सहर पुग्ने यात्रुहरुको लाम लागेको छ । जसमध्ये अधिकांश भारतबाट अवैध रुपमा नेपाल प्रवेश गरेका कामदारहरु छन् । बसमा लर्को लागेर यात्रा गर्ने अवैध नेपाल प्रवेश गरेकाहरुका कारण कोरोना संक्रमण बढ्दैन भन्न सकिँदैन ।
बीरगन्जस्थित बसपार्कमा काम गर्न देशका विभिन्न शहरमा जानेको भीड बिहानदेखि बेलुकासम्म देखिन थालेकाे छ । सवारीसाधान सन्चालन गर्दा ५० प्रतिशत मात्र यात्रु चढाउनु पर्ने निर्देशन छ । एक पंक्तिको सीटमा एक यात्रु, सीट बाहेक यात्रु राख्न नपाइने, सबै यात्रुले मास्क लगाउनु पर्ने, ढोकामा स्यानिटाइनजको व्यवस्था हुनुपर्ने, चालक सहचालक मास्क, भाइजर र ग्लोब्स लगाउनुपर्ने, सवारीलाई दैनिक विसंक्रमित गराइनुपर्ने भन्ने प्रशासनको निर्देशन छ । तर, निर्देशनलाइ पाखा लगाउँदै खचाखच यात्रु ओसार्नेहरुको कमी छैन ।
प्रशासनले सीमानाकामा कडाइ गरेकाे बताएपनि अवैध प्रवेश राेकिएकाे छैन । पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङका अनुसार सीमानाकाबाट मानिस आवतजावत रोक्न सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ । तर, अनाैपचारिक बाटाेहरूकाे प्रयाेग गर्दै मानिस भित्रि रहेकाे पाइएकाे उनले बताए ।
साउनकाे पहिलाे साता पनि सरकारले लकडाउन फुकुवा गरेसँगै सुरू भएकाे चहलपहलले संक्रमण बढाएकाे थियाे । लकडाउनको अन्त्यसँगै पर्सामा सञ्चालनमा आएका उद्योगधन्दामा भारतबाट अवैध रुपमा आएका मजदुरहरुले कोरोना संक्रमण फैलाएका थिए । नतिजा स्वरूप, प्रशासनले पुनः निषेधाज्ञा लगाएकाे थियाे ।
असोज १ गतेबाट परिवर्तन भएको निषेधाज्ञाको मोडालिटीका कारण पुनः संक्रमण बढ्दैन भन्न सकिन्न ।
Previous articleअब होम स्कुलिङ, अभिभावक शिक्षक, सम्भव छ ?
Next articleबारामा बम विष्फोट तथा संगठित अपराधमा समलग्न रहेको फरार प्रतिबादी पक्राउ
Sunil khadka September 26, 2020 At 10:55 am
सिमा नाका हरु बन्द गरेर करोना संक्रमण नियन्त्रण हुन्छ भन्नु माहा बेबकुफी हो करोना संक्रमण र मृत्यु दर भारत मा भन्दा झण्डै ३ गुणा बढी ले बढोत्तरी भैरहेको छ। पहिला जनसंख्या को आधारमा क्याल्कुलेसन गर्नु पत्रकार ज्यु जति जना भित्रिएका छन् त्यस को दोब्बर भारत प्रवेश गरिरहेका छन्। केहि रोक्किनु को समस्या आधार कार्ड नहुने हरु हुन् । बोर्डर पुरा खोलिदिएको खण्डमा कमसे कम दिन को ५९ हजार नेपाली नागरिक भारत जाने छन्।